Mbola Haiti ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Repoblikan'i Haiti ((mg))
18°32′21″N 72°20′11″W﻿ / ﻿18°32′21″N 72°20′11″W﻿ / ﻿18.53917; -72.33639
Haiti, na Repoblikan'i Haiti, dia firenen'ny Antila Be maka ny ampatelo andrefan'ny Nosy Hispaniola (28 km2 eo ho eo). Ny renivohiny dia Port-au-Prince. Niisa 8,3 tapitrisa ny isam-ponina tany Haiti tamin'ny 2005.
Lasa repoblika mainty manam-pahaleovantena voalohany izy teo aorian'ny tolom-piavotana haisianina (1791-1803) nitondra ny tafik'i Napoleon Bonaparte niala teo. Haiti irery no firenena miteny frantsay manam-pahaleovantena any Karaiba.
Any andrefan'i nosy ny Hispaniola ny Haiti, faharoa amin'ny nosy ngeza indrindra any antily. Fahatelo amin'ny firenena ngeza indrindra ny Haiti, eo arian'ny Repoblika Dominikana sy Koba. Tendrimbohitra fotsiny ny ankabeazan'ny tany any Haiti. Ny nosy hafa an'i Haiti koa dia :